के हो कोरोना भाइरस ? कसरी बच्ने ? - Nepali Times Australia :: The First Nepali Magazine Published in Australia
-- नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : आइतवार, चैत्र ९, २०७६
चीनमा देखिएको खतरनाक कोरोना भाइरसको प्रकोप दिन–प्रतिदिन बढ्दै गैरहेको छ । उक्त भाइरस हालसम्म संसारभरी महामारीको रुपमा फैलिएकाे छ । भने हजारौं मानिसहरू उक्त भाइरसबाट मृत्यु भएकाे छ भने लाखाै मानिसहरु संक्रमित भैसकेका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण हुने खतरनाक निमोनिया जस्तो रोग अब चीनबाट इटली लगायत युराेपका धेरै देशहरु, अष्ट्रेलिया, भारत, सिंगापूर, मलेशिया र अमेरिकासम्म पुगिसकेको छ । कोरोना भाइरस भएको मानिस नेपाल नभित्रिन भनेर नाकाहरूमा र त्रिभुवन विमानस्थलमा कडा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको भएता पनि केही मानिसहरूमा यो भाइरस संक्रमण भएको खबर आइरहेको छ । कोरोना भाइरस अति नै खतरनाक र यसले ज्यान पनि जान सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कोरोना भाइरस र रोगको अहिलेसम्म कुनै उपचार अथवा भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन । यस्तो अवस्थामा यदि कोहि व्यक्ति यो भाइरसको चपेटामा आयो भने त्यो व्यक्तिको उपचार हुन सक्दैन । त्यसैले यो खतरनाक भाइरसबाट बच्ने केवल एउटै तरीका भनेको सुरक्षाा अपनाउनु हो ।
कोरोना भाइरसको लक्षण
यो रोगको लक्षण अति नै सामान्य छ र कुनै पनि व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट पीडित नभए पनि उसमा यस्तो लक्षणहरू देखिन्छ । जस्तै ः नाकबाट सिंगान बगिरहनु, टाउको धेरै दुख्नु, खोकि र कफ हुनु, घाँटि दुख्नु, ज्वरो आउनु, थकान र बान्ता आउला जस्तो महसुस हुनु, सास फेर्न गाह्रो हुनु आदि ।
इन्फेक्सन फैलनबाट रोक्ने उपाय
कोरोना यो भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा फैलन्छ कि फैँलदैन भन्ने कुराको पुष्टि अझै भएको छैन । तर पनि सावधानी अपनाउनु अति नै आवश्यक छ । चीनमा फैलिएको खतरनाक कोरोना भाइरस झन झन खतरनाक हुँदै गएको छ र यो फैलने क्रम जारी नै छ । चीनको स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले यो भाइरसलाई अति नै खतरनाक श्रेणीमा राखेका छन् । सबै भन्दा चिन्ताजनक कुरा के हो भने यो रोगमा लक्षण देखिनु अगाडि नै रोगले मानिसहरूलाई आफ्नो चपेटामा लिइसकेको हुन्छ । चीनको वुहानमा मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा कैद गरेर राखिएको छ । यो शहरबाट कसैलाई पनि निस्कने अनुमति छैन । चीनमा मानिसहरूलाई एकआपसमा हात नमिलाउन सल्लाह दिइएको छ ।
घाँटि संधै रसिलो बनाइराख्नु पर्छ
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले आफ्नो घाँटि सधैं रसिलो बनाइराख्नु पर्छ । यदि तपाइँले लामो समयसम्म पानी नखाई प्यासै बस्नु भयो भने तपाईको घाँटिको झिल्ली सुख्खा हुन्छ र यो भाइरसले तपाईमा सजिलै संक्रमित हुन सक्छ । त्यसैले समय समयमा पानी पीइरहनु पर्छ ।
उमालेको पानी पिउनु पर्छ
सधैं पानी उमालेर पीउनु पर्छ । कोरोना भाइरसबाट बच्न पानी उमालेर पिउनु अति नै आवश्यक छ । एकै पटकमा धेरै पानी पिउनु भन्दा तातो पानीलाई चिया जस्तै गरेर विस्तारै विस्तारै पिउनु पर्छ ।
शाहाकारी खाना खानु पर्छ
केही दिनको लागि मांसाहारी खाना खान बन्द गर्नुहोस् । कोरोना भाइरस जनावरबाट मानिसहरूमा सर्ने भएकोले तपाईले कुनै पनि जनावरको मासु नखानु नै बुद्धिमानी हुन्छ । कोरोना भाइरसको प्रकोप रहुञ्जेल तपाई शाहाकारी खाना नै खानु उपयुक्त हुन्छ ।
भिटामिन सीको सेवन
भिटामिन सी तपाईंको रोग प्रतिरोधक क्षमता बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । आफ्नो दिनहुँको खानामा सुन्तला, स्ट्रोबेरी, ब्रोकाउली जस्ता भिटामिन सी पर्याप्त मात्रामा भएका कुराहरू सेवन गर्नु पर्छ ।
बी कम्प्लेक्स ट्याब्लेट
भिटामिन सी संगसंगै जिंक र बी कम्प्लेक्स पनि दिनहु सेवन गर्नु पर्छ । यसले पनि तपाईको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बलियो बनाउछ र तपाई रोगहरूबाट बच्न सक्नु हुन्छ ।
तुलसी र बेसारको काँडा
तातो पानीमा तुलसी, अदुवा, मरीच र बेसार हालेर काँडा तयार गर्ने र दिनहुँ त्यसको सेवन गर्नु पर्छ । यो आयुर्वेदिक र घरेलू उपायले हरेक प्रकारको भाइरस र ब्याक्टोरियाबाट तपाईलाई टाढा राख्न सहयोग गर्छ । धेरै तारेको भुटेको खाना खानु हुँदैन । स्वास्थ्यवद्र्धक खानाहरू खानु पर्छ । तातो तातो रस अथवा भेजिटेवल सूप पीउनु पर्छ । यसले पनि तपाईको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बलियो बनाउँछ । तपाईको शरीर संधै रोगहरूसंग लड्नका लागि तयार रहन्छ ।
सार्वजनिक स्थलहरूमा जानुबाट बच्नु पर्छ
केही समयसम्मका लागि भीँडभाड भएको ठाउँहरूमा जानबाट बच्नु पर्छ । सार्वजनिक स्थानमा कसैसंग हात मिलाउनु हुँदैन । सार्वजनिक यातायात र ठाउँहरूमा कुनै कुरालाई छोए पछि तुरुन्त ह्यान्डवाशले हात धुनु पर्छ । फोहोर हातले अनुहार, आँखा, नाक अथवा मुख छुनु हुँदैन ।